Densitron အသစ်အမြင့်မားတဲ့ resolution ကိုထိန်သိမ်းမိတ်ဆက် display ကို module ကို mount - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Densitron display ကို module ကို mount အသစ်အမြင့်မားတဲ့ resolution ကိုထိန်သိမ်းမိတ်ဆက်
Kent, ဗြိတိန်, 25 ဇွန်လ 2019 - Densitron, HMI နည်းပညာများနှင့် Display, မော်နီတာနှင့် embedded ကွန်ပျူတာဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖန်တီးသူ, ယနေ့ UReady 2U အပြည့်အဝ Surface ကသိုလှောင်ဆင်ပြသမှု, signal ကိုများနှင့်ရုပ်ပုံစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဘို့နဲ့ Multitouch projected capacitive နဲ့ထိန်းချုပ်သည့်စနစ်အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအသစ်တစ်ခု 2RU TFT display ကိုမိတ်ဆက် ထုတ်လွှင့်, AV စနစ်, အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်အခြားသူများအပါအဝင် applications များ၏ကျယ်ပြန့ဘို့ထိ (ရာခိုင်နှုန်း) ။
တစ်ဦး 16.3 "အလျားလိုက်, high resolution ကတော့မြင်နိုင်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်တကွ, 2U အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ထိန်သိမ်း display ကိုမျိုးစုံကဗီဒီယိုရုပ်ပုံမော်နီတာနဲ့ audio အဆင့်ကိုဘေးချင်းယှဉ်ကြည့်ရှုအားပေးခံရဖို့ကိုဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရာခိုင်နှုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘုံ signal ကို interfaces တစ်မျိုးစုံအကွာအဝေးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်ရန်အတွက် display ကိုဖွင့်များ၏အကျိုးအတွက်ပေးပါသည်။
Densitron ဂလိုဘယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဒါရိုက်တာခရစ် Goodhall, တကစျေးကွက်ကွာဟမှုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မထိုက်မတန်ရဲ့ကြောင့် 2U အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ထိန်သိမ်း display ကို၏နိဒါန်းသိသာဖြစ်ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာထိန်သိမ်းအရွယ်ထုတ်ကုန်နဲ့ဆက်စပ် display တွေအများစုအတွက်အနိမ့် resolution ဖြင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းမျက်နှာပြင်ကြာရှည်ခံမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ပုံရိပ်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သား၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်သိသာသော်လည်း, ၎င်း၏အမြင့်ဆုံး resolution က IPS screen နှင့်စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့ခံစားခြင်းနှင့်တုန့်ပြန့်ခွဲထား။ "
အများအပြားအလားတူထုတ်ကုန်များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်မြင်သာဆဲထိန်သိမ်းတဲ့အခန်းအတွက်ရရှိနိုင်အာကာသအတွင်း fit နိုင်ပါတယ်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်။ အများစုမှာလုပ်ငန်းလည်ပတ် user interface ကိုအချို့ type ကိုမလိုအပ်ပေမယ့်သူတို့အ interfaces ပုံမှန်အားဖြစ်ကောင်းအနည်းငယ်စက်မှုခလုတ်နှင့် / သို့မဟုတ် rotary dial နှင့်အတူဒွန်တွဲကန့်သတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏သေးငယ်တဲ့နိမ့် resolution display ပါဝင်သော, များသောအားဖြင့်အခြေခံဖြစ်ကြသည်။
အသုံးပြုသူများသည်ယနေ့ထိုကဲ့သို့သောထိန်သိမ်းတပ်ဆင်ထား device များအတွက်မြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသူ interfaces ဖန်တီးနိုင်စေဖို့မျှော်လင့်ထားပေမယ့်ယခုတိုငျအောငျအဘို့သင့်လျော် display တွေရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
အဘယ်အရာကို Densitron ပြုတော်မူပြီစမတ်ဖုန်းကဲ့သို့ display ကို, အ 19 "ထိန်သိမ်း width ကိုအများစုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့၏အသုံးဝင်သောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးအလွန်အမင်းမြင်နိုင်နှင့် ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောလမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးနှင့်သီးခြားလျှောက်လွှာအကောင်းဆုံးသင့်လျော်ကြောင်းတစ်ခု interface ကိုဖန်တီးစီစဉ်ဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်နိုင်ပါတယ်။
ပင် display ကိုရှိခဲ့သည်လျှင် Goodhall ဥပမာ "ကဆက်ပြောသည်အများစုတည်ဆဲထိန်သိမ်းတပ်ဆင်ထားကိရိယာများပေါ်တွင်, တကယ့်, ကိရိယာပေါ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုအသုံးဝင်မြင်နိုင် preview ကိုပေးတတ်နိုင်သမျှမပြဘူး။
အဆိုပါ 2U အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ထိန်သိမ်း display ကိုအလွယ်တကူ preview မှအသုံးပြုသူများကိုဖွ "တဲ့ high resolution ကတော့အနည်းဆုံးအဘယ်ကြောင့် device ကိုမှတဆငျ့ထွက်နေပါတယ်။ ဒါဟာအစအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးကိုက်ညီဖို့ GUI ကို၏အသွင်အပြင်နှင့်အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်အသုံးပြုသူများအားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကျြမှောကျခတျေစမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet ပေါ်မှာရှာတွေ့လိမ့်မယ်အကျွမ်းတဝင် multitouch နှင့်ပွတ်ဆွဲရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအများတို့သည်လည်းပါဝင်သည်။ "
အဆိုပါ display ကိုရဲ့မြင့်မားတဲ့ resolution ကို 1920 x ကို 285 မျက်နှာပြင်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှထူးခြားသောဖြစ်ထင်နေသည်။ အရေးကြီးတာကသူ့ရဲ့က IPS နည်းပညာကြောင့်နီးပါးမည်သည့်ထောင့်ကနေအမြင့်ဆုံးမြင်ကွင်းကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်ထုတ်လွှင့်ဈေးကွက်မှအထူးအရေးကြီးသောအရာသည်အကျယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုထောင့်သေချာ။
အဆိုပါ 2U အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ထိန်သိမ်း display ကိုယခုရရှိနိုင်ပေမယ့်ရပ် B2019, ခန်းမ 13 အပေါ် 17-41 စက်တင်ဘာလကနေအမ်စတာဒမ်အတွက် IBC 8 မှာယင်း၏အရာရှိတဦးပွဲဦးထွက်စေမည်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 45 ကျော်တည်ထောင် Densitron ကမ္ဘာတဝှမ်းဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုက်ညီမယ့် Display ကိုကျွမ်းကျင်သူဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုထိတွေ့အခြေစိုက် HMI (လူ့စက် Interface) ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့အထူးလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့အဖြေရှင်းရန် bespoke ထုတ်ကုန်ဖန်တီးပါ။ နိုဝင်ဘာလအတွက် 2015 Densitron အဓိကအားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းမှအလွန်အမင်း optimized ကွန်ပျူတာဖြေရှင်းနည်းများနှင့်မော်နီတာဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Quixant PLC ကဝယ်ယူခဲ့သည်။ အာရှ, ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကနှင့်အတွေ့အကြုံရလျှောက်လွှာအင်ဂျင်နီယာများအတွက်ရုံးများကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအခြေစိုက်အတူတူ, ကုမ္ပဏီ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, ငါတို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်နည်းကအမြဲယဉ်ကျေးမှုလိုအပ်ချက်များကိုတစ်ဦးနှံ့နှံ့စပ်စပ်ဒေသခံအသိပညာနှင့်နားလည်မှုခံရမှုဖြစ်ပါတယ်သိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ထုတ်လွှင့်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, လုံခြုံရေး, မော်တော်ကား, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအပါအဝင်ကဏ္ဍ၏ကျယ်ပြန့တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.densitron.com.
AV အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် Densitron display Solutions Display ရဲ့နည်းပညာ အီလက်ထရောနစ် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HMI isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော ရာခိုင်နှုန်း SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TFT display UReady UReady 2U အပြည့်အဝ Surface ကသိမ်းတန်းပြရန် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-06-25
ယခင်: ဗေသလမီဒီယာ Facilis ထံမှအကူအညီနှင့်အတူဘုရားကျောင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဘဝမှကယျတငျ
နောက်တစ်ခု: Video Editor (Freelance)